रामकृष्ण अधिकारी : "जो कोहीलाई पनि भुइँचालो विद्का रुपमा मिडियाले उभ्याईदिने काम गर्यो" - DISASTER REPORTING RESOURCES FOR THE MEDIA
रामकृष्ण अधिकारी : “जो कोहीलाई पनि भुइँचालो विद्का रुपमा मिडियाले उभ्याईदिने काम गर्यो”
शनिवारको दिन भएकोले घरमा आराम गरेर टिभि हेर्दै वसिरहेको थिएँ ।
सँगै अर्काे कोठामा भाई, भाउजु र सानो भतिज वसिरहेकोले उतै पट्टि गएँ । दुई वर्ष पुग्दै गरेको भतिजलाई साथमा लिएँ र टेवुलमुनि अडेस लगाएर बसें । घर पूरै हल्लिरहेको थियो । घर भत्किएन भने बाँचिन्छ, भत्किए मरिन्छ भनेर मानसिक रुपमा तयार भएर बसें ।
त्यतिखेर तपाइलाई सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा (सरोकार) के लागेको थियो? (What were your most important concerns at that time?)
परिवार नै महत्वपूर्ण चासो र सरोकारको विषय बन्दो रहेछ, हामीसँग सो अवस्थामा घरमा नभएका दाजु, वुवा ममिको अवस्था वुझने कुरा पहिलो सरोकारको विषय वन्न् पुग्यो ।
त्यस बेला तपाईंले के-कस्ता सुचना खोज्नु भयो? तपाईंले आवश्यक सुचनाहरु पाउनु भयो त? (What types of information were you looking for at that time? Did you have access to all the information you needed?)
पारिवारिक अवस्था वुझिसकेपछि आफू सञ्चारकर्मी पनि भएकोले कहाँ के-कस्ते अवस्था छ भन्ने जानकारी लिने प्रयत्न्न गरियो । सामाजिक सन्जाल फेसवुक, ट्वीटर, विभिन्न अनलाइन पोर्टलहरु, मोवाइल आदिवाट कहाँ के अवस्था रहेछ भन्ने जानकारी लिन खोजियो । रेडियो, टिभि मार्फत पनि केही सूचनाहरु लिन थालियो । वेलावखत टेलिफोन, इन्टरनेटमा आएको समस्याका कारण कतिपय सूचनाहरु सहजै पाउन सकिएन ।
तत्कालका लागि सवैभन्दा वढी रेडियो, त्यसमा पनि रेडियो नेपाल अलिक वढी सूचना लिन भरपर्दाे माध्यम वने । साथमा अनलाइन पोर्टलहरु पनि । टिभि हेर्ने र सूचना लिने अवस्था त्यति भएन । समाचारपत्रहरु भोलिपल्टका लागि मात्रै महत्वपूर्ण वन्न् पुगे । मिडियाको कमजोर पक्ष भनेकै सूचनाको राम्रो भेरिफाई गर्न नसक्नु रहयो । कतिपय अवस्थामा आफूखुसी समाचार सम्प्रेषण गरिदिने समस्या रह्यो । भुइँचालो कत्रो गएको हो, कस्तो खालको भूइचालो हो भन्नेमै मिडिया पिच्छे फरक-फरक तथ्यहरु आए । कुनलाई आधिकारिक मान्ने भन्नेमा समस्या रहयो । मिडियाले विज्ञहरुको छनौट गर्न सकेनन् । कतिपयले आफूखुसी विज्ञका नाममा मिडियामा मान्छेहरुलाई ल्याउन थालियो । एक किसिमले भन्दा जो कोहीलाई पनि भुइँचालो विद्का रुपमा मिडियाले उभ्याईदिने काम गर्यो । जसले गर्दा सही सूचना भन्दा पनि सर्वसाधारण र आतंकित जनतालाई झनै आतंकति र अन्यौल वनाउने काम पनि भयो । यो मिडियाको नकारात्मक पक्षक रुपमा देखियो । त्यसका साथमा भत्किएका खढडहरु, शवका तस्विरहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर देखाउँदा मान्छेहरुमा वढी निरासा छर्ने काम पनि मिडियावाट भए । मिडियाको सवल पक्ष भनेको उनीहरु जोखिम उठाएर मानसिक तनाव लिएरै भएपनि निरन्तर काममा खटिए । जनतालाई सुसुचित गर्ने आफनो दायित्व र कर्तब्यवोधमा कन्जुस्याई नगरी सक्दो सुचना सम्प्रेषणमा मिडिया र मिडियाकर्मीहरु जुटे ।
भूकम्पपछिको हप्ताको कुरा गर्दा दुई दिन आफू कार्यरत सस्थामा निरन्तर काममा खटें । आफनो नुवाकोटमा रहेको घर भत्किएकोले तेस्रो दिन भने नुवाकोट लागे र त्यहाँ रहनु भएका वुवा ममिलाई पाल राखेर अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने काममा वित्यो ।
स्मरणीय पक्ष भनेकै भुइँचालो आउँदा घर भित्रै रहेर घरसँगै हल्लिनु नै रहयो । आफू वालाजु क्षेत्रमा वस्ने भएको हुँदा घरवाट वाहिर निस्कंदा आफनो वसोवास आसपासका क्षेत्रमा घरहरु ढलेका, मान्छे मरेका देख्दा आङ नै सिरिंग्ग हुने वनायो । सायद त्यो दिनको यो नै स्मरणीय पक्ष रह्यो ।
विपत्ति कसैले रोकेर रोकिन्न्, भूकम्प आउँछ, त्यसले मानवीय क्षति गर्ने भन्दा पनि हामीले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुका कारण हामीले क्षति ब्यहोर्नु पर्ने रहेछ । जसकाकारण सुरक्षित तवरले भूकम्प प्रतिरोधी खालका साना घरहरु निर्माण गर्ने, प्राकृतिक विपत्तिको पूर्व तयारीमा वस्ने गर्नु पर्दाे रहेछ भन्ने शिक्षा यसवाट मिलेको छ ।
Be the first to comment on "रामकृष्ण अधिकारी : “जो कोहीलाई पनि भुइँचालो विद्का रुपमा मिडियाले उभ्याईदिने काम गर्यो”"